Ngeke ngiphinde ngibuke iNetflix futhi uma ngingabheki kulolu hlelo lokusebenza olusha olukhulu - BGR - Tamban RELAY
Accueil » UKUZIJABULISA Angisoze ngaphinde ngayibheka iNetflix futhi uma ngingabheki kulolu hlelo lokusebenza olusha olupholile - BGR
Angisoze ngaphinde ngayibheka iNetflix futhi uma ngingabheki kulolu hlelo lokusebenza olusha olukhulu - BGR
Uyazi ukuthi isiqubulo se-HBO sithi "Akuyona iTV, yi-HBO"? Lesi sitatimende sasingesona isiqubulo iminyaka eminingi, kwakuyiqiniso. Imibukiso ye-HBO yayihlukile, inikela ngokubhala okungalingani nenani lokukhiqiza. Kodwa-ke, lezi zinsuku, i-HBO akuyona into eyayiyiyo. Inethiwekhi isakhiqiza ukusakazwa okuhle kakhulu, kepha amanye amanethiwekhi athuthukise umdlalo wawo futhi manje usungathola uhlelo lwe- "HBO-quality" okungenani kwizitudiyo ezihlukene eziyishumi nambili. Phakathi kwazo kukhona i-Netflix, futhi abanye bangasho ukuthi iNetflix iye yadlula ne-HBO ngezindlela eziningi. Izolo nje, uzakwethu angibuze ukuthi yini engizoyikhetha uma kufanele ngikhansele ukuthenga kwami ​​kweNetflix noma ukubhalisela i-HBO. Kungakapheli iminyaka eyi-5 edlule, angisoze ngakhanselwa i-HBO. Namuhla, noma kunjalo, bengizokhetha ukugcina iNetflix ibekwe phezulu kwe-HBO khona lapho. Uthola ukufakwa koqobo okufana ne-HBO ngokuya ngekhwalithi, kanye nomtapo wezincwadi omkhulu wokuqukethwe kwabantu besithathu ngezengezo ezintsha ngaso sonke isikhathi. Lokhu kusobala ukuthi kungani i-HBO Max ihlelwe, kepha kuyindaba ehlukile.
Angicabangi ukuthi ngedwa ngicabanga ukuthi i-Netflix njengamanje ukuphela kwensizakalo yokusakaza ngaphandle engingafuni ukungincisha yona. Lokho akusho ukuthi iNetflix iphelele. Lapho usukhethe uhlelo, i-movie noma uhlelo olukhethekile futhi waqala ukusakaza, usesendaweni efanele. Kodwa-ke, indlela esizeni seNetflix iminyene kakhulu kangangokuba abasebenzisi bayacasulwa ukuvulwa ngakunye. Ngenhlanhla, ngithole uhlelo lokusebenza olusha olusheshe lwaba yindlela yami engiyithandayo yokusakaza iNetflix ngoba ixazulula zonke izingqinamba ezinzima kakhulu ezihlobene nesibonisi sokusakazwa kwensiza.
Uma ubuka iNetflix kwi-Mac, Ukuchofoza kwe-Netflix ama-dbk labs yi-5 $ engcono kakhulu owake wayisebenzisa. Lolu hlelo lokusebenza olulula ngokumangalisayo lusebenza njengengosi kuwebhusayithi yeNetflix, kepha luhlunga yonke imininingwane engafanele oyizondayo futhi lishiya kuphela okuqukethwe okuhle ofuna ukukuhambisa.
Lolu hlelo lokusebenza olusha lweNetflix lugcwele izici, kodwa ezimbalwa engizithanda kakhulu.
Okokuqala, Ukuchofoza kweNetflix kufaka phakathi inkinga yenkinga yeNetflix abantu abazonda kakhulu. Kulungile, ngikhuluma ngama-trailer adlala i-auto-play. Akukho lutho olubi ukwedlula ukwethula iNetflix futhi ukuhlaselwa ngokushesha yi-trailer ye-movie yasekuqaleni noma uhlelo oluthuthukiswa yiNetflix ngaleso sikhathi. Ngemuva kwalokho usongela phansi uhlu ukuwuyekisa ukuthi udlale kanti kwenzakalani? Unembile ... enye i-trailer iqala ukudlala ngokuzenzakalelayo. Futhi kwenzekani lapho upheqela entweni engenayo i-trailer? I-Yup ... useqala ukudlala indawo engahleliwe kusuka kumdlalo noma ifilimu ku-loop. Ugh .
Ukuchofoza kweNetflix kumisa i-craze ngebhokisi elilodwa kuphela ongalihlola kusikrini sezintandokazi. Ungavimbela nemiphumela yokuhambisa phezulu kumaphosta, ungazinaki ngokuzenzakalelayo i-intros, shintshela ngokuzenzakalelayo kwisiqephu esilandelayo sombukiso ekugcineni kwesiqephu ngasinye, nokuningi. Iqiniso lokuthi ungalawula yonke into kusuka kubha yokuthinta uma usebenzisa iMacBook Pro futhi likuvumela ukuthi ubonise ividiyo bese ushintshele kumodi yesithombe emfanekisweni uma ufuna ukuzama ukusebenza ngenkathi usebenza. Landela umdlalo wakho owuthandayo.
Kusetshenziswa okuhle okuguqula ngokuphelele indlela obukeka ngayo kwiNetflix. Kubiza cishe inkomishi yekofi ye-chic e-Starbucks. Bheka ngokuqinisekile.
Lokhu kushubisa phansi okwesabisayo kukhombisa uBill Hader oguqula abe ngu-Tom Cruise - BGR
Nazi izinguquko ezinkulu nezibuyekezo ze-10 - BGR
[Tribune] Ukuvukela okudumile: qaphela amanzi alala- JeuneAfrique.com
Izakhiwo Nezindawo: E-Morocco, ukungazethembi e-Addoha kumenyezisa inani layo lemakethe yesitoko - JeuneAfrique.com
I-Egypt ixoxisana ngezivumelwano zokubambisana neSigfox, SAP neKaspersky
Ukwakhiwa kabusha kwayo, i-IAI izofuna ukusekelwa kwe-African Union ne-UNESCO